Nezvedu - Xuzhou Honghui Glass Zvigadzirwa Co., Ltd.
Xuzhou Honghui Glass Zvigadzirwa Co., Ltd.iri iri Junsheng mativi, Xuzhou City. Iyo indasitiri uye kambani yekutengesa inosanganisa kusimudzira uye kugadzira, dhizaini, kugadzira, kutengesa uye kutengeserana. Tine kodzero yekutengesa zvinhu kunze kwenyika. Fekitori yedu Tine mvumo yekutengesa zvinhu kunze kwenyika. Fekitori yedu ine makore anoda kusvika makumi matatu ekuvandudza uye ekugadzira ruzivo. Kambani yedu inotora yepamusoro yekugadzira tekinoroji uye yakadzika yekugadzirisa tekinoroji, isu tine epamberi yekuyedza michina uye zviridzwa, kuitira kuti isu tine simba rekuvandudza kugona Iyo mhando yezvigadzirwa zvegirazi inonyatso kudzorwa, uye yakahwina nyasha yevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuUnited States, Russia, Canada, Australia, Vietnam nedzimwe nyika zana nematunhu.
Iyo kambani yakavambwa muna Kukadzi 2015, isu tine mashanu madhipatimendi, kusanganisira vekunze vekutengesa dhipatimendi, rezvekutengeserana dhipatimendi, rekugadzira dhipatimendi, nezvimwewo rine Alibaba webhusaiti uye 1688 mawebhusaiti.Ikambani yedu ine anopfuura makumi mashanu ehunyanzvi mamaneja maneja uye vatengesi maneja. Uye zvakare, isu tine nyanzvi dhizaini timu, kuti tikwanise kugadzira mhando nyowani dzemabhodhoro zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi uye kugadzira zvigadzirwa zvitsva zvevatengi munguva pfupi.
Isu tinopawo ese mabhodhoro egirazi akagadziridzwa ekugadzirisa kwakadzika, senge kuchando, electroplating, kupuruzira, kushandisa uye kuongorora kudhinda.Tinopa zvinopfuura zvigadzirwa zve3000 zvinosanganisira mabhodhoro egirazi, senge magirazi vhasi, mabhodhoro ezvinonhuwira, mabhodhoro emafuta emuorivhi, chirimwa tsika mabhodhoro, akasiyana mabhodhoro echinwiwa, makenduru emwenje, matangi ekuchengetera, mabhodhoro ekuzora uye akasiyana emakemikari ekuyedza anoenderana zvinhu, girazi beaker nezvimwe zvakadaro.Tine yakakwana sevhisi system, tinogona kupa agency zvinhu, senge mota yekufambisa, chitima, kutakurwa kwegungwa uye kutakurwa kwemhepo. Xuzhou Honghui girazi zvigadzirwa Co, Ltd. inogamuchira vatengi kubva pasirese, isu tiri kutarisira kuzove wako akavimbika mudiwa!